पर्यटन गतिविधिको अपेक्षा
कोरोना भाइरसका कारण गत ४ महीनादेखि बन्द होटल तथा रेस्टुराँ बिहीवारबाट खुलेका छन् । अब ट्रेकिङ, ट्राभल, र्‍याफ्टिङलगायत पर्यटन गतिविधि पनि सञ्चालन गर्ने बाटोमा खुलेको छ । यद्यपि सरकारले पर्यटन व्यवसायलाई गति दिन थुप्रै काम गर्न भने बाँकी नै छ । सरकारले खाना अर्डर गरेर लैजान पाउने व्यवस्था गरिदिएदेखि नै रेस्टुराँहरूको व्यवसायले आंशिक गति लिन थालेको थियो । अब होटलहरू पनि खुल्न थालेपछि पर्यटन गतिविधि सहज हुने देखिन्छ । बन्दाबन्दीका कारण रोकिएका पर्यटकले नेपाल कोरोनाबाट सुरक्षित रहेको बताएको सन्दर्भमा विश्व पर्यटन बजारमा यो सन्देश प्रवाहित गर्न सक्नुपर्छ ।
पर्यटकबाट कोरोना भित्रिन नदिन भने विशेष मापदण्ड बनाइनुपर्छ । तर, ती व्यावहारिक र कार्यान्वयनयोग्य तथा व्यावसायिक दृष्टिले सम्भाव्य पनि हुन आवश्यक छ ।
पछिल्लो समयमा नेपालमा होटल क्षेत्रमा करीब रू. ८१ अर्ब नयाँ लगानी भएको छ । व्यवसायीहरूका अनुसार यस क्षेत्रले झन्डै १० जनालाई रोजगारी दिएको छ । यस क्षेत्रमा कुल रू. १४ खर्ब ३० अर्ब लगानी भएको छ भने बैंकहरूको ऋण लगानी नै करीब १४ अर्ब रहेको देखिन्छ । ४ महीनासम्म यो क्षेत्र बन्द हुँदा अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर परेको छ । श्रमिकको पारिश्रमिक विवाद पनि अन्त्य भइसकेको अवस्थामा होटल खुल्दा सबै पक्ष उत्साहित देखिएका छन् । तर, सरकारले यिनीहरूलाई व्यवसाय पाउने वातावरण नबनाइदिए होटलहरू थप समस्यामा पर्नेछन् । भदौ १ गतेदेखि आन्तरिक र बाह्य उडान खुला हुने भएकाले पर्यटकको स्वास्थ्य जाँचका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउनुपर्ने हुन्छ । सरकारले विदेशी पर्यटकलाई ७ दिन क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने नियम बनाएको छ । ५/७ दिनका लागि घुम्न आउने पर्यटकले यतिका दिनसम्म क्वारेन्टाइनमै बस्नु परे नेपाल किन आउलान् ? अर्को, विदेशमा नै पीसीआर परीक्षण गरेर आउँदा बीचैमा भाइरस संक्रमण भएमा अर्थ हुँदैन । त्यसैले विमानस्थलमै स्वास्थ्य जा“च गर्ने व्यवस्था मिलाइनुपर्छ । पर्यटकबाट कोरोना भित्रिन नदिन भने विशेष मापदण्ड बनाइनुपर्छ । तर, ती व्यावहारिक र कार्यान्वयनयोग्य तथा व्यावसायिक दृष्टिले सम्भाव्य पनि हुन आवश्यक छ ।
पर्यटन व्यवसायीले पनि तत्कालै व्यवसाय पाइहाल्ने, नाफा भइहाल्ने सोच राख्नु हुँदैन । कोरोनासँग नतर्सिने व्यक्तिहरू तथा नेपाल सुरक्षित छ भन्ने व्यक्तिहरूलाई यहाँ ल्याउन सकियो भने यसबाट सकारात्मक सन्देश जान्छ । अक्टोबरको सिजनका लागि पर्यटकले बुकिङ गर्न सक्छन् । त्यसैले आगामी सिजन खेर नजाने गरी रणनीति तय गर्नु उपयुक्त हुन्छ । ४ महीना होटेल बन्द हुँदा आत्तिएका व्यवसायीबीच सीमित पर्यटक तानातान गर्न अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा पनि हुन सक्छ । त्यसो नगर्न व्यवसायी आफै सचेत हुनुपर्छ किनभने यसले व्यवसायकै वातावरण बिगार्न सक्छ ।
नेपालमा कोरोना संक्रमण भए पनि यो नियन्त्रणमा रहेको सन्देश विश्व पर्यटन बजारमा पु¥याउन आवश्यक छ । नेपालको प्रमुख पर्यटन बजार चीन र भारत भएकाले त्यहाँ कोरोनाको अवस्था साम्य नभएसम्म पर्यटक ल्याउन कठिन र चुनौतीपूर्ण देखिन्छ ।
होटेल खोल्न दिए पनि लामो दूरीको सवारीसाधन चल्न दिइएको छैन । यो प्रतिबन्ध पर्यटकीय परिवहनमा पनि लागू भएको छ । पर्यटकीय परिवहन सञ्चालन गर्न दिए थोरै भए पनि आन्तरिक पर्यटकको चहलपहल हुन सक्छ । नागरिकको एउटा समूहमा कोरोनासम्बन्धी ज्ञान पर्याप्त भएकाले ती सुरक्षा सावधानीका साथ पर्यटनमा सहभागी हुन चाहन्छन् पनि । तत्कालका लागि पर्यटन गतिविधि अगाडि बढाउन नेपालको मौसम प्रतिकूल छ । तर, यसमा सुधार आउनासाथ आन्तरिक पर्यटनले गति लिन सक्छ ।
कोरोना सतर्कता अपनाउँदा विमान भाडालगायत सेवा महँगो पर्ने निश्चित छ । यस्तो महँगो शुल्क तिरेर कुनै पर्यटक आउँछ भने त्यो पक्कै खर्चालु पर्यटक हुन सक्छ । त्यसैले नेपालको पर्यटन प्रडक्ट, यहाँको कोरोना स्थितिलगायत समेत प्रचार गर्न सके गुणस्तरीय पर्यटनका लागि अवसरसमेत हुने देखिन्छ ।